फार्मेसीमा लागूऔषध बिक्री
धनगढी । कैलालीको धनगढीमा रहेको एक फार्मेसीले लागूऔषध समेत बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीले मंगलबार प्रेषित गरेको सूचनामा धनगढी उपमहानगरपालिका–२, बैय्याबेहडीस्थित दीर्घराज अधिकारीले सञ्चालन गरेको कुशल फार्मेसीबाट लागूऔषधजन्य वस्तु विक्री भइरहेको पाइएको जनाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गोप्य सूचनाका आधारमा सो फार्मेसीमा टोली खटाउँदा लागूऔषधका रूपमा प्रयोग हुने दुई सय … Read more
कैलालीसहित प्रदेश ७ का चार जिल्लामा औंलोको उच्च जोखिम
धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ (साविक सुदूरपश्चिमाञ्चल) का चार जिल्ला औंलोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । देशभरि १२ जिल्ला औंलोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । त्यसमध्ये यस प्रदेशको कैलाली सहित कञ्चनपुर, बैतडी र डडेल्धुरा उच्च जोखिममा रहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । एनोफिलिम प्रजातिको लामखुट्टेको टोकाईबाट मानिसमा सर्ने औंलोको संक्रमण देशका अन्य स्थान भन्दा सुदूरपश्चिममा बढी देखिएको … Read more
युरिक एसिडको समस्यामा के गर्ने ? यस्तो छ सरल विधि
युरिक एसिड अहिले धेरैको निम्ति टाउको दुखाईको विषय बन्ने गरेको छ । युरिक एसिडकै कारणले कतिले खानपानमा कटौती गर्नुपरेका छ भने, कतिको दिनचर्या नै प्रभावित भएको छ । शरीरको जोर्नीमा यसको खास असर हुन्छ । कसलाई हुन्छ युरिक एसिड – जो अस्वस्थ्यकर खाना खान्छन् तर, शारीरिक श्रम गर्दैनन् । – वंशानुगत रूपमा पनि दोस्रो पुस्तामा … Read more
योगा गर्नै पर्ने १६ कारणहरू
मानिसले निश्चय नै आफूलाई सधैँ स्वस्थ राख्न चाहन्छ । तर, जति कोसिस गरे पनि रोगले शरीरलाई छाड्ने होइन । कताबाट रोग आइलाग्छ पत्तै हुँदैन । स्वस्थ्य रहनका लागि मानिस बिहानबिहानै दौडिन्छन्, जिम लान्छन्, जिउ मर्काइमर्काई ‘डान्स’ गर्छन् तै पनि भनेजस्तो हुँदैन । एरोबिक, ब्याडमिन्टन, कराँतेजस्ता खेल पनि मान्छेले स्वस्थ्य रहने उपायकै रूपमा लिन्छन् । स्वस्थ्य … Read more
सरकारी अस्पतालमा अझैं फार्मेसी सञ्चालनमा आएनन्
धनगढी । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालको मातहतमा रहने फार्मेसी सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट छुट्याए पनि कैलालीमा अझै सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । कैलालीका दुई सरकारी अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आवश्यक बजेट निकासा भइसकेको जनाइएको छ । फार्मेसी सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले गत पुसमा सेती अञ्चल अस्पताल र टीकापुर अस्पताललाई अनुदान निकासा गरेको थियो । मन्त्रालयले गत … Read more
एसिडिटी हुने कारण र जोगिने उपाय
हाम्रो खाना नलीको ठिक तल एउटा थैलो हुन्छ, जसलाई हामी पेट भन्छौं । यसको भित्री भित्ताको कोशिकाबाट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न हुन्छ । यो पाचनको नियमित प्रक्रिया हो । यही एसिडले खाना पचाउने काम गर्छ । तर, जब पेटले आवश्यकताभन्दा बढी एसिड उत्पन्न गर्छ, हाम्रो शरीरलाई समस्या पार्छ । एसिडिटीको लक्षण के हो ? छाति पोल्नु, … Read more
गर्मीमा फ्रिजमा चिस्याएको पानी पिउनुहुन्छ ? यसका पाँच बेफाइदा यस्ता छन्
स्वभाविक छ– गर्मीयाममा चिसो पानी जो कोहीलाई पिउन मन लाग्छ । अझ फ्रिजमा राखेको चिसो पानी पिउनुको त मज्जै अर्कै हुन्छ । त्यसैले त धेरैजसो मानिस गर्मीमा फ्रिजकै पानी पिउन खोज्छन् । तर, त्यस्तो पानी पिउनुका बेफाइदाबारे भने धेरैजसोलाई ज्ञान नहुन सक्छ ? वास्तवमा भन्ने हो भने, फ्रिजको पानी पिउनुमा जति मज्जा हुन्छ, त्यसका बेफाइदा … Read more
कैलालीमा नौ हजार बढी स्वास्थ्यबिमामा आबद्ध
धनगढी । कैलालीमा एक वर्षको अवधिमा नौ हजार बढी व्यक्ति सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन् । गएको साल चैत २५ गतेदेखि पहिलो चरण अन्तर्गत नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको कैलाली जिल्लाबाट सुरुवात गरेको हो । सामाजिक स्वास्थ्य विकास समिति, धनगढीका अनुसार कैलालीमा यो अवधिमा एक हजार सात सय ८२ परिवारका नौ … Read more
यस कारण महिलाले साइज अनुसारको ब्रा लगाउनुपर्छ
महिलाहरु ब्रा लगाउँछन् । तर, गलत साइजको ब्रा लगाउँदा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने विज्ञले औंँल्याएका छन् । विश्वमा करिव ८० प्रतिशत महिला गलत साइजको ब्रा लगाउने गरिएको अनुमान पनि गरिएको छ, भने शारीरिक अभ्यासका क्रममा स्पोर्ट्स ब्रा पनि लगाउँदैंनन् । तर, फिजियोथेरापिष्टहरुले भने ब्रा किन्नुअघि आफ्नो छातिको साइज लिन सुझाव दिएका छन् । गलत ब्रा … Read more
लागूपदार्थ नियन्त्रणका लागि अन्तक्र्रिया
धनगढी । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) क्षेत्रीय कार्यालय धनगढी र शान्ति युवा समूहको संयुक्त आयोजनामा बुधवार कञ्चनपुरको बेलौरीमा युवा दुव्र्यसनी तथा लागुपदार्थ नियन्त्रणका लागि सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक् अन्तक्र्रिया भएको छ । अन्तक्र्रियाको इलाका प्रहरी कार्यालय, बेलौरीका इञ्चार्ज प्रहरी निरीक्षक कृष्णनन्द भट्टले उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रम शान्ति युवा समूहका संयोजक सिद्धराज विकको अध्यक्षतामा भएको थियो । … Read more